Umshini wekhofi kagesi womshini we-conam burr China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Ceramic Grinding Burr > I-Ceramic Conical Burr ye-Coffee grinder > Umshini wekhofi kagesi womshini we-conam burr
I-Model No.: JH.CGE.001
Kuyi-standard design conical grinding burr yemishini yamakhofi kagesi. Sigcina ukuphepha okuningi kwalolu hlobo lwe-ceramic burr isikhathi eside ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ezivamile nezikhathi esifushane.
Esikhathini esifanayo, senziwe ngama-95% alumina ceramics. Ngokuphathelene nokukhathazeka kwethu, le ndaba ine-high-abrasive, anti-corrision, eco-friendly, ezibiza izindleko. Ngenxa yale nzuzo ye-alumina conical ceramic burr, idlulisa i-grinder yekhofi ngalolu hlobo lwe-ceramic burr ukuthola ukuncintisana okwengeziwe.